FAQs - Somali - Premise
Maxay Premise qabataa?
Premise waxay ka urursataa xogta meela kala duwan oo aduunka ah si ay uga caawiso haayadahu in ay ka jawaabaan su’aalahooga ugu muhiimsan. Nala wadaag aqoontaada gudaha dalka adigoo dhameystiraya shaqooyin fudud, sida inaad nala wadaagto fikirkaaga, dhameystrito xog-ururin kooban ama aad ka qaado sawiro magaaladaada dhexdeeda si ay u caawiso in ay haayaduhu sameeyaan go’aamo fiican oo cilmi-yeysan.
Yey Premise u shaqeysaa?
Premise waxay u shaqeysaa dawladaha, ururada gargaarka bina’aadamnimada iyo shirkada macaash raadiska ah. Qaar ka mida macaamiishayada hada iyo kuwii horeba waxa ka mida Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobey, haayada maraykanka ee USAID, iyo baanka aduunka.
Sideen u noqdaa caawiye?
Dhamaan waxaad u baahan tahay waa moobil smartphone ah iyo app-ka premise, kasoo lagala degi karo Google Play Store iyo Apple App Store. Dajiso app-ka, sameyso akoon oo dhameystir shaqadaada koobaad si aad u bilowdo inaad lacag qaadato.
Halkee ayey Premise diyaar ku tahay?
Hada waxaanu ka shaqeynaa in ka badan 70 dal oo aduunka ah si degdega ayaananu u koreynaa. Helitaanka shaqooyinku waxay ku xidhan tahay baahiyaha haayadaha aanu la shaqayneyno, sidaa daraadeed diyaar ahaanshaha shaqooyinku si joogto ah ayey isku badeli karaan.
Miyaan u baahanahay nooc tilifoon gaara?
Iyadoo ay ku xidhan tahay gobolka, app-ka Premise waxaa laga heli karaa labadaba Google Play Store iyo Apple App Store. Si kastaba ahaatee, Premise kaliya waxa laga heli karaa qalabka Android ee goobo gaara. Tlifoonka Android waa inuu noqdaa nooca 4.0 ama mid ka danbeeyey si uu app-ku ugu shaqeeyo.
Miyaan u baahanahay khadka internet-ka? WiFi?
Haa, khadka internet waa loo baahan yahay si loogu galo shaqooyinka, laguna dhameystiro oo lagusoo dubiyo codsiyada lacag qaadashada.
Lacag intee leeg ayaan ka sameyn karaa Premise?
Xadiga lacagta ee caawiyayaashu qaadan karaan waxay ku xidhan tahay inta shaqo ee ay dhameystiraan. Qaar ka mida caawiyayaashadu u isticmaalaan lacagtooda in ay iskaga bixiyaan lacagta iskuulka, ugu deeqaan bangiga cuntada dadka bilaa guryaha ah, waxaanay ku dhameeyaan horumarinta mashaariicda guryahooda. Waxaanu isticmaalnaa dhowr nooc oo lacag bixiyayaal ah, sida Coinbase, Paypal iyo lacag moobilka lagu diro si aan uga dhigno nidaamka lacag bixinta mid fudud. Lacag bixiyayaashayadu way kala duwan yihiin wadamada.
Miyuu jiraa xad nambarka shaqooyinka aan dhameystiri karo?
Xadka kaliya ee awoodaada dhameystirka shaqooyinku wuxuu ku xidhan yahay dalbashada xogta ee goobta iyo inta kale ee ka agdhow ee shaqooyin soo dalbanaya . si aad u dhameystirto shaqooyin badan ilaa inta suurto gal ah, waxaan kugula talineynaa inaad si joogto ah u eegto suuqa shaqooyinka, dalbato shaqooyin aad rabto inaad qabato, oo aad u dhameystirto sida ugu dhakhsaha badan ka hor inta aanu qof kale qaadan.
Premise ma amaan baa?
Premise marwalba waxa ka go’an amaanka iyo wanaajinta caawiyayaashada waxaananu ku dadaalnaa inaan hubino in ay helayaan khibrad wanaagsan inta ay isticmaalayaan app-ka. Waxaanu qaadnaa dhowr talaabo oo ka hortag ah si aan u hubino amaanka, oo ay ka mid yihiin inaan la shaqeyno Khubarada Taageerada Wadamada si aan u nashqadeyno shaqooyinka oo aan u helno fahan wadanka gudihiisa ah.
Miyaan u baahanahay helitaanka goob iyo kamarad?
Shaqooyinkayagu waxay u baahan yihiin qaadista sawiro ama tagista goobo cayiman, taasoo ah sababta aan u codsano fasaxyada sida helitaanka goobta iyo kamaradu in ay shidnaadaan.
Hadii aad qabto waxa su’aalo oo dheeri ah, fadlan iimayl nagusoo dir support@premise.com.